I-China iqinise amazinga wokuhlola wezinto zokuvikela ubhubhane | Ukuqamba kabusha
Ukuqhamuka kwe-coVID-19 kuza isimanga. Ikhwalithi yemishini yokuvikela ukulwa nobhubhane inquma impumelelo yokulwa ne-coVID-19 nokuphepha kwabantu. Ngaphansi kwesibopho semishini, abaphathi nabasebenzi be-Weifang Product quality ukuhlolwa Institute beza ukuzothwala umthwalo osindayo wokuhlola ikhwalithi yama-athikili wokuvikela ubhadane. Banikela ngemindeni yabo banakekele wonke umuntu, futhi basebenze emgqeni ongaphambili imini nobusuku ukwakha isikali esinzima kakhulu nokusiza ukunqoba impi yokulwa nalomqedazwe.
Uma kukhona ucingo lokulwa, luphendule
Ubhadane yilo myalelo. Ngokwenhlangano ebumbene ye-Weifang Market Supervision Bureau, i-Weifang Quality Inspection Institute kufanele isungule amaqembu amabili okugada nokusekelwa kwezobuchwepheshe ngesikhathi esifushane, yenze impi "yemigqa emibili", bese iqedela umsebenzi wokuqapha okuphuthumayo nokutholwa kwama-anti Imikhiqizo yokuvikela ubhubhane.
Lesi sikhungo sihlele umhlangano ophuthumayo ngosuku lwesine loNyaka Omusha ukuze kugqugquzelwe izikhulu nabasebenzi bezimboni ezifanelekile ukuba babuyele ezikhundleni zabo ngokushesha futhi bazinikele emsebenzini wokuvimbela nokulawula ubhubhane. Ebhekene nalolu bhubhane, amalungu eqembu lesikhungo kanye namalungu omgogodla wezobuchwepheshe badlale kakhulu indima yama-commandos namandla amakhulu, betshala ifulegi leqembu elikhanyayo phambili nokwakha inqaba yempi phambili.
Ngenxa yokuqubuka okungazelelwe kwalo bhubhane, iziqu zokuhlolwa kwamamaski ayi-13 nezinto zokuhlola izingubo zokuzivikela ezingama-23 ezikulesi sikhungo azisakwazi ukuhlangabezana ngokugcwele nezidingo zokuhlolwa kokulwa nobhubhane. Ngenxa yokuthi izinhlobo eziningi zezimaski zomphakathi azinawo amazinga afanele kazwelonke nezezimboni, amabhizinisi amaningi nawo afune usizo lwalesi sikhungo.
Isidingo sokulwa nalomqedazwe kanye nezidingo zamabhizinisi yikholi lokwenza okuthile. Lapho ubhekene nokushoda kwemishini ehlobene nobhubhane, ubuholi noMqondisi uGuo Min bathathe inkathazo yokuxhumana nabakhiqizi basekhaya ngocingo, esikhathini esifushane kusuka eZhejiang ukuthenga ukushoda okukhethekile kwasekhaya kwezinto zokuhlola okuzenzakalelayo, izinga lokugeleza kwegesi futhi enye imishini yokuhlola ekhethekile.
Ukufakwa nokufakwa kwemishini kwaqedwa ngosuku lokufika kwayo. Ithimba labacwaningi besayensi liqhubekile nokutadisha izinqubo zokusebenza kanye nokuhlolwa kokulingisa okuphindiwe, futhi balinganisa ubuchwepheshe bokuhlola nokusebenza zingakapheli izinsuku ezimbili. Baqhathanisa kaningi idatha yokuhlola nokuhlola neJiangsu Special Safety Protection and Inspection Center ukuqinisekisa ukunemba kwedatha yokuhlola. Ngasikhathi sinye, baqinisa isicelo sokwandisa iziqu zokuhlola futhi baphasa isivivinyo ngempumelelo.